Fanka - Joornaalka Naqshadeynta
Ka hel naqshadeeyayaasha wanaagsan ee naqshadeeyayaasha adduunka oo dhan.
Baadh naqshad wanaagsan
Ka soo saar alaabada hal-abuurka ah magacyada caalamka.
Baadh alaabada hal-abuurka leh
Ka soo hel mashruucyada dhismaha ee ugu weyn naqshadeeyeyaasha adduunka oo dhan.
Baadh naqshad weyn
Ka soo hel naqshadeeyayaasha moodada caalamiga ah naqshadeeyayaasha.
Baadh naqshadaha moodooyinka hal-abuurka leh
Ka hel naqshadaha garaafyada ugu weyn ee naqshadeeyayaasha naqshadaha adduunka oo dhan.
Baadh naqshadeynta garaafyada ugu weyn
Ka soo hel qaab dhismeedka istiraatiijiyadeed ee ugu waaweyn wakaaladaha naqshadeynta adduunka.
Sahaminta naqshadaha istiraatiijiyadeed ee ugu weyn
Muraayadaha Indhaha Collection Soo aruurinta 'horumarsan | qoryaha "waxa lagu gartaa muraayadaha bulkieriyaarka naqshaduna waxa lagu nuuxnuuxsaday halabuurka saddex-geesoodka ah. Isku-darka alwaaxyada cusub iyo gacan-galinta ugu fiican ee gacanta ayaa macnaheedu yahay in qaab kasta oo muraayad ROLF ah oo muraayadaha indhaha ah ay ka kooban tahay xaraf gacmeed.
Hilqado Iyo Giraan
Sabti 28 Bisha Sideedaad 2021
Hilqado Iyo Giraan Ku dhiirrigeliyay qaababka laga helay dabiicadda, Soo ururinta Vivit waxay abuurtaa aragti xiiso leh oo cajiib ah qaababka dheer iyo khadadka wareegaya. Gogo 'Vivit wuxuu ka kooban yahay go'yaal dahab ah oo jaallo ah oo jaallo ah oo leh xargaha miiqdiyaha madow ee wajiga bannaanka. Hilqado ubax-qaabeysan ayaa ku wareegsan dhegta dhegta si ay u noqoto dhaqdhaqaaqyo dabiici ah waxay abuurtaa qoob-ka-ciyaar xiiso leh inta u dhaxaysa madow iyo dahabka - qarinaysa iyo muujinta dahabka jaalaha ah hoosta. La'aanta qaababka iyo astaamaha ergonomic ee ururintan ayaa soo bandhigaya ciyaar xiise leh oo iftiinka, hooska, iftiinka iyo ishaarooyinka.
Hilqado Iyo Giraan Ururinta Mouvant waxaa wax ka jiheystay qaar ka mid ah mustaqballada Futurism, sida fikradaha dhaqdhaqaaqa firfircoonaanta iyo abuurista isku-xirnaanta ee uu soo bandhigay farshaxanka Talyaaniga Umberto Boccioni. Hilqadoodi iyo giraankii Ururinta Mouvant waxay soo bandhigayaan dhowr jajab oo dahab ah oo cabirro kaladuwan ah, oo loo habeeyay qaab ah in lagu gaaro hiigsiga dhaqdhaqaaqa oo abuuraya qaabab badan oo kala duwan, iyadoo ku xiran xagasha in la arki karo.
Khamiis 26 Bisha Sideedaad 2021
Giraantu Dunida dabiiciga ah waxay ku jirtaa dhaqdhaqaaq joogto ah maadaama ay isku dheelitirto kala dambeynta iyo fowdada. Naqshad wanaagsan ayaa laga abuuray xiisad isku mid ah. Tayada awooda, quruxda iyo firfircoonida waxay ka timaadaa awooda farshaxaneedku inuu u furnaado kuwa ka soo hor jeeda inta lagu guda jiro falka abuurista. Qaybta la dhammeeyay waa wadarta xulashooyinka aan tirin karin ee uu farshaxanku sameeyo. Fikirka oo dhan iyo dareemkuba maahan waxay keenaan shaqo adag oo qabow, halka dareenka oo dhan iyo xakameyn uusan ka dhalan shaqo oo ku guuldareysto inuu is muujiyo. Isdhaafsiga labada waxay noqon doontaa muujinta qoob ka ciyaarka nolosha lafteeda.
Arbaco 25 Bisha Sideedaad 2021
Labbiska Markay iftiinka u soo galaan daaqadaha oo leh heer wanaagsan, waxay soosaaraysaa heer iftiin qurxoon, iftiin si ay dadka u keenaan qolka marka qarsoodiga iyo aamusnaanta maskaxda, sida Nyx oo leh qarsoodi iyo aamusnaan, adeegsiga dhar go'ay iyo maroojin in ay buunbuunin tafsiirkii quruxda badnaa.
Talaado 24 Bisha Sideedaad 2021
Silsilad Xirafad qurxoon ayaa dhiirrigelisay ruffs, qurxinta qoorta qadiimka ah ee aad ku arki karto sawirro badan oo qurux badan qarnigii XVI iyo XVII. Waxaa lagu gartay naqshad casri ah iyo mid casri ah, fududeynaysa qaabka caadiga ah ee ruffs isku dayaya inuu ka dhigo mid casri ah iyo mid casri ah. Saamayn xamaasad leh oo siisa xarrago qofka wax xiraya, adigoo adeegsanaya midabyo madow ama caddaan ah ayaa u oggolaanaya isku-darka isku-darka leh naqshad casri ah oo saafi ah. Hal silsilad qoorta u sudhan, dabacsan iyo nal. Qalab aan qaali ahayn laakiin leh naqshad sare oo cajiib ah oo cajiib ah oo ka dhigaysa korantadan kaliya maaha dahab laakiin qurxinta jirka cusub.
Waxaan jecel nahay naqshadaha asalka ah iyo hal abuurka, farshaxanka, naqshadaha, moodada, naqshadaha sawirka, hal abuurka iyo istaraatiijiyadda naqshadeynta. Maalin kasta, waxaan doorana oo u daabacnaa nashqadeeyayaal naqshadeeyayaal hibo leh, farshaxanno hal abuur leh, naqshadaha hal-abuurka leh iyo sumado waaweyn. Hadafkayagu waa inaan abuurno qadarin caalami ah iyo wacyigelin ku saabsan qaabeynta wanaagsan.
Calendar 2014 “Town” Kalandarka Arbaco 22 Bisha Sagaalaad
Artificial Topography Muuqaalka Talaado 21 Bisha Sagaalaad
Conspiracy - Sandal shaped jewels- Kabaha Raaxada Isniin 20 Bisha Sagaalaad
Muraayadaha Indhaha Hilqado Iyo Giraan Hilqado Iyo Giraan Giraantu Labbiska Silsilad